Pedri Oo Garoomada Ka Maqnaanaya Inta Ka Dhiman Sanadkan Sida Barcelona Ay Xaqiijisay
HomeWararka CiyaarahaPedri oo Garoomada ka Maqnaanaya inta ka dhiman Sanadkan Sida Barcelona ay Xaqiijisay
November 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay waayi doonto adeega Pedri inta ka dhiman sanadka sababo la xiriira dhibaato bowdada ah.
19-sano jirkaan ayaa 52 kulan u saftay kooxda Catalan intii lagu jiray ololihii 2020-21 ka hor inta uusan u matalin Spain ciyaaraha Yurub iyo Ciyaaraha Olombikada.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa kaliya afar kulan u saftay Barcelona inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkaan, inkastoo, kulankiisii ​​ugu dambeeyay uu ka horyimid Benfica ee Champions League dhamaadkii Ogosto.
Tababaraha Barcelona Xavi ayaa ku rajo weynaa inuu dooran karo xiddiga heerka caalami ee dalka Spain horaantii December.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay AS , da’da yar ayaan diyaar u aheyn kooxda Catalan ilaa 2022 sababtoo ah dhaawac muruqa ah oo dhib badan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa dhaliyay afar gool, waxaana loo diiwaan geliyay lix caawin 56 kulan oo uu u saftay kooxdiisa haatan tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Las Palmas bishii Sebtembar 2019.